Xaggeenna haddii uu qof maqaal yar qoro oo uu rabo in uu dadka soomaalida ah u sheego xog kooban wuxuu si qaab daran ugu barxayaa ereyo badan oo ingiriis ah. Waxaa badan in qoraallada soomaalidu ay sidaan u eg yihiin: ”Xog (information) ku saabsan (about) tacliinta (the education) oo laga sii daayey idaacadda qaranka (the national radio”!
Ujeeddada ka banbaysa in uu qofka soomaaliga ahi sidaas qaabka daran dadkiisa wax ugu gudbiyaa waa isla ujeeddada ka danbeysey in aynu diricnimo ka raadinno hadal la sheegay in uu ku soo dhacay nin ingiriis ah qalbigiisa. Haddii ay innaga qalbiyadeenna kun goor ku soo dhacdo in aynu diricyo nahay kuma aynu kalsoonin, oo xataa madaxdii kacaanku waxay awoodi waayeen in ay ayagu soomaalida u sheegaan in ay diricnimo riman yihiin. Sidaas darteed ayey nin cad oo London khamro ku cabbaya niyaddiisa diricnimo uga soo xigteen jeeljiraha harraadan ee soomaalida.
Ereyada sida fooshaxun loogu walaaqo afka soomaaliga markii la qorayo iyo markii lagu hadlayo waxaa ka danbaysa nacasnimo xun oo fadeexad ah. Qofka soomaaliga ahi wuxuu xoogga ugu badan saara sidii uu bulshada inteeda kale u gelin lahaa in uu asagu wax yaqaan. Haddii uu jaamacad ka baxo danta ugu weyn oo uu uga jeedaa waa in ay soomaalidu ogaadaan in uu aqoon leeyahay. Markii uu dandaas gaaro wax kale uma uu baahna oo in uu xirfaddii uu bartay shaqo ku helo iyo in kale waa isugu mid, waayo awalba wuxuu gudanayey xil ah in ay dadku ogaadaan in uu jaamici yahay, waana uu gutey xilkii saarnaa!
Hal dhibaato ayuu qofka soomaaliga ahi qabaa, waana in uu ka baqayo in aysan soomaalida kale citiraafin. Ummadaha kale iskama uu dhiso ee wuxuu iska gadaa soomaalida, wuxuuna soomaalida u soo bandhigaa inta uu ka garanayo afafka qalaad. Haddii qoraalkiisa laga waayo luqad kale wuxuu dareemayaa in ay soomaalidu jaahil u haystaan. Sidaas awgeed wuxuu ka shaqeeyaa in uu soomaalida harawsado, wuxuuna shahaadadiisa ku soo bandhigtaa in uu hadalkiisa ku walaaqo ereyo qalaad, markaas ayuu qancaa.
Dunida inteeda horumarka fiican haysata waxaa ku badan dadka qora taariikhnoloneedkoodii, waayo in qof aftahan ahi uu filimadii nolosha oo uu soo maray soo bandhigo waxaa ku duugan xikmad weyn oo ay bulshadu u baahan yihiin.
Innagu arrintaas oo kale ma aynu samayn karno, waayo kalsooni ma aynu hayno. Afkii aynu ku qori lahayn kuma aynu qanacsanin, oo dalkii iyo noloshiisa kuma qanacsanin. Qof kastaa meeshii uu ku dhashay iyo hannaankii uu u soo koray waa uu qarsanayaa, siiba dadka miyiga ku dhashay oo magaalooyinka soo galay ibtilo weyn baa haysata, oo waxay marayaan heer ay noloshoodii oo dhan inkiraan. Kuwa magaalooyinka ku soo koray qudhooda haddii ay faqri ku soo koreen inkiraad bay gelayaan, dadkuna faqri bay u badnaayeen, oo dhawr wasiir oo lacag xaday iyo dad farokutiris ah baa ladnaa. Qofkii uusan aabbihiis waddanka lacag ka musuqmaasuqin waa in uu taariikhnololeedkiisa inkiraa. Odayga laftiisu waa in uu noloshiisa inteedii hore qariyaa, waayo inkiraad baa socota!
Dooddaas waxaan ka maqlay dad ku dadaaley ni ay xal u helaan dhibaatadaan, laakiin waa hadal aysan aragtitayda waxba ka jirin, waayo dadka xoolaha iyo beeraha ka shaqeeyaa waa ay isku kalsoon yihiin. Qofka xoolodhaqatada ah ama beeraleyda ahi inta uu xoolaha iyo beeraha la joogo kalsooni buu qabaa beenna ma uu ka sheego nolosha oo wax kasta sida ay yihiin buu uga warramaa. Markii uu beerta iyo xoolaha ka tago oo uu magaalada qaraabo ugu tago ayuu wuxuu bilaabaa in baararka fariisto oo noloshiisa been ka sheego, waayo wuxuu ku dayanayaa dadka uu soo dhexgalay oo beenta badan.
Waxaa jirta dood kale oo sheegaysa in ay kalsoonidarrida uu soomaaligu afkiisa, hantidiisa, hoygiisa iyo dalkiisa ka qabo ay ugu wacan tahay in uu yahay qof asalkiisu reerguuraa ahaa oo aan degganayn. Dooddaan waxaa rumaysan dad aan reermiyiga aqoon, waayo dadkeenna miyiga deggani aad bay isugu kalsoon yihiin. Afka soomaaliga waa ay jecel yihiin, degaanka aad bay u jecel yihiin, mid kastaana hantidiisa waa uu ku iimaanqabaa, mana uu qariyo degaankiisa iyo xoolihiisa, beenna kuma uu faano haddii aysan labo beelood isxifaalaynayn.
Qofkii sidaas ahaa markii uu magaalo yimaado oo uu kalmado carabi iyo ingiriis ah barto wuxuu inkiraa afkii soomaaliga, wuxuuna sheegtaa in uu wasiir dhalay oo waalidkiisii lo’da ama beerta lahaa oo uu ka yimid badda ayuu ku daraa. Waxaa laga yaabaa in uuba laftiisu sheegto in uu wasaarad agaasiye ama maareeye guud ka ahaan jirey, ama uu gashaanle sare ahaa oo uu ciidamada ka ruqsaystay!
Waxaas oo shakhsiyadxumo iyo been ah ma uu aqoon intii uu xoolaha iyo beerta ka shaqaynayey. Haddaba waxaa jira hadal oranaya soomaalida reermagaalkoodu waxay la dhaqan yihiin carabta, reermiyigooduna waxay la dabeecad yihiin reergalbeedka. Dadka reergalbeedka ahi waxay ku kalsoon yihiin noloshooda iyo duruufohooda, mana uu jiro qof ay sida uu u nool yahay ceeb la tahay, oo dadkooda qof kastaa waa uu ka sheekayn karaa sidii uu u soo noolaan jirey, waana uu ku faraxsan yahay.
Xagga carabta waxaa ka jira isyasitaan iyo isu faanfaan caqliga ka baxsan. Sidaas darteed waa in uu qofku sheegtaa in uu ka mid ahaan jirey heerka bulshada inteeda kale ka sharaf badan oo ah madaxda iyo maalqaabeenna. Halkaas ayeyna ku dhimatay shakhsiyaddii qofka carbeed, waxaana ku dayday reermagaalka soomaalida oo dhammaantood wada maareeye, agaasime iyo gashaanle ama saddex xidigle midkood ah!
Dhaqanka carabtu gebi ahaan wuxuu ku salaysan yahay in ay dadku isgumaystaan. Ninka carabka ahi xaaskiisa iyo carruurtiisa wuxuu u gumaystaa qaab yaqyaqsi ah oo banii’aadanimada ka fog. Markii uu oday noqdo wuxuu gumaystaa qaraabadiisa oo dhan, wuxuuna noqdaa ilaah gaban ah oo ehelkiisa uga sokamara ilaaha weyn oo salaadda, sakada iyo soonka lagu caabudo. Nin kasta oo carab ahi markii uu cirroole noqdo wuxuu noqdaa sanab ay qaraabadiisu caabudaan, oo aan laga dabahadlin. Haddii uu madax yahay ama uu maalqabeen yahay wuxuuba ninka carabka ahi ilaahnimo isu diyaariyaa asaga oo dhallinyaro ah, waxaana caabuda dadka yaqaan dhammaantood.
Qofka soomaaliga ahi wuxuu ku jiraa halgan uu nacabkiisa kaga hortegayo. Haddaba nacabka qofka soomaaliga ahi waa kuma? Nacabka ruuxa soomaaliga ahi waa bulshada soomaalida, wuxuuna qofku cadowgaas isaga difaacaa in uu cilmi been ah, jago been ah iyo hanti been ah u sheegto, isla markaas uu ka qariyo taariikhnololeedkiisa iyo filkiisa si aysan uga helin goldaloolo ay ka yasaan, waayo dhagar baa socota sida uu u fakarayo marka la eego. Si uu qofka soomaaliga ahi nacabkiisa uga guulaysto ayuu dagaal uu ku xukumo iyo boob uu hanti ku helo u lebbisan yahay.
Xaasidnimo iyo xiqdi ay nacasnimo ku dheehan tahay buu qofka soomaaliga ahi bulshadiisa kula dhexjiraa. Marka aynu xaasidnimada iyo xiqdiga caadiga ah ka hadlayno waa wax la garan karo oo aynu aadamiga kale la wadaagno, laakiin xagga soomaalida waxaa xaasidnimada ku dhafan nacasnimo aan lala qabin. Tusaale cad waxaa ah in uusan ruuxa soomaaliga ahi qofka uu neceb yahay dadnimadiisa iyo kartidiisa qiri karin, ee uu toos u inkiro asaga oo axmaqnimo ku dhiirranaya. Qof ay kartidiisu qorraxda ka caddahay ayaa haddii la neceb yahay waxaa la iska oranayaa ”Waxba ma uu qaban karo”, isla markaas qof liita ayaa haddii la jecel yahay waxaa la iska oranayaa ”Waa halyey”. Sababaha qof lagu jeclaado ama lagu nebcaadaa waxay xagga soomaalida u badan yihiin nacasnimo, sidaas darteed waxaa aad u badan dad aan wax weyn ku fiicnayn in ay bulshada ugu magacdheer yihiin, waayo habkii wax loo qiimaynayey baa waxaa ka buuxa axmaqnimo iyo xaasidnimo isbarkan.
Mar kasta qof baa waxaa loo dirayaa hawl uusan ka bixi karin, markii uu guuldarraystana waxaa lagu beddelayaa mid ka sii liita, waxaana meeshaas fadhiya dad sida ugu habboon ugu guulaysan lahaa hawshaas, laakiin uusan nacaska nacabka ahi ogayn ama uusan kartidooda u qirayn. Doorasho kasta oo ay dad soomaali ahi sameeyaan waxaa ku milan nacasnimo iyo nacabnimo, waana lagu guuldarraysanayaa. Runtii waa wax laga murugoodo in uusan qofka soomaaliga ahi waxba kala aqoon oo uu yahay nacas nacab ah, laakiin waxaa laga yaabaa in bollaal sano ka dib la arko qof soomaali ah habayaraato ee wax fahmi kara!
Ayagaysu muuqanahayee, moog adduunyada’e